Ukuqonda ukuHlola kunye nokuSebenza kwiZigwebo
Ukugqwesa okanye ukugijima kwizivakalisi zezivakalisi ziqulethe iziqendu ezininzi ezizimeleyo ngokulandelelana, ukuya kwinqanaba lokuba zivakala kwaye zixhala. Xa ufanele uhlolisise, isigatya esizimeleyo ibinzana eliba ligama elipheleleyo:
Ndiyathanda amaqanda ekudleni kwasekuseni.
Uodadewethu ukhetha ipakeki.
Ngamanye amabinzana apha ngasentla unokuma njengesigwebo ngokwalo, kodwa ukuba ubhala (kunye nabanye) ngale ndlela kwisicatshulwa, umyalezo jikelele uya kuzwakalisa umsindo.
Ndiyathanda amaqanda ekudleni kwasekuseni. Kodwa udadewethu ukhetha ipakeki. Ngoko umama wethu wenza zombini. Kwaye sinokuthi sinakho into esiyifunayo.
Ukuze sigcine ukubhala kwethu kwi-sounding kakhulu, siyakwazi ukudibanisa izivakalisi zibe zibini okanye ezizimeleyo kwiimvakalisi kwisigwebo esisodwa. Ezi zixhunyaniswe ngokuchanekileyo ngumbutho wokudibanisa .
Ndiyathanda amaqanda ekudleni kwasekuseni, kodwa udadewethu ukhetha i-pancake. Umama wethu wenza zombini, ngoko ke sinako ukufumana into esiyifunayo.
Khangela ukuba oko kuvezwa kangcono? Zivakala ngcono, kodwa kufuneka siqaphele ukuba singadluli! Asikwazi ukubeka amanqaku amaninzi ahlukeneyo kwisigwebo esisodwa, okanye sineziganeko zethu zokuqhuba okanye izivakalisi zethu.
Qaphela: Unokukhumbula izihlanganisi zokudibanisa ngokukhumbuza igama elithi FANBOYS.
F = ngenxa
A = kunye
B = kodwa
O = okanye
Y = okwamanje
S = njalo
Isivakalisi sokungcebeleka singabonakala ukuba silandele imithetho yobugcisa begrama kwiindawo, kodwa isivakalisi sizwakala singalunganga kuba ingcamango igxotha kwisifundo esinye.
Inqaku elingezantsi sisivakalisi esisodwa esineendima ezininzi ezizimeleyo.
Ndandonwabile ukuhamba phantsi kweso sikhokelo njengomkhwenkwekazi emtshatweni wam udade, kodwa ndandidumala gqitha xa ndikhubeka phakathi kwesi siganeko, kuba xa ndaphula, ndakhangela phezulu ndaza ndabona udadewethu kwaye ndicinga ukuba uya ukuphelelwa amandla, kuba ndimbona emile emnyango esalindele ukuba aqale ukuhamba phantsi kweso sikhephe, kwaye ubuso bakhe bubuhlophe, ubukeka ngathi uya kuphosa.
Ininzi yale nto ibonakala ichanekile kuba iziqendu ezahlukeneyo zixhunyaniswe ngokuchanekileyo (ngaphandle kwesinye i- comma splice ). Unganqikazi ukuphula izivakalisi ezinokuthi:
Ndandonwabile ukuhamba phantsi kweso sikhokelo njengomtshakazi kumtshato wodadewethu. Nangona kunjalo, ndandidumala gqitha xa ndikhubeka phakathi kwesi siganeko - ngakumbi xa ndifumene. Ndakhangela phezulu ndaza ndabona udadewethu kwaye ndicinga ukuba uya kuphelelwa amandla. Ndambona ebemi emnyango, elindele ukuqala kwakhe ukuhamba phantsi kwendlela. Ubuso bakhe bonke babemhlophe kwaye ubukeka ngathi uya kuphosa!
Ekuhambeni-kwisivakalisi, izigatshana azixhomekeke ngokufanelekileyo kunye neziphumlisi ezichanekileyo okanye ukudibanisa.
Ingxaki : Njalo xa ndiya kwivenkile ndagijima kwintombazana enye igama nguFran kwaye ungumhlobo womzala wam.
Isixazululo 1 : Njalo xa ndiya kwivenkile, ndigijima kwintombazana enye; igama lakhe nguFran, kwaye ungumhlobo womzala wam.
Isixazululo sesi-2 : Njalo xa ndiya kwivenkile, ndiya kwintombazana enye. Igama lakhe linguFran, kwaye ungumhlobo womzala wam.
Jonga ukuba izimpendulo ziphucula njani isivakalisi?
Ingxaki : Ndizama ukungasebenzisi iepenki ezivame ukuvuza Ukulahleka kwamagqabhoko ambalwa ngenxa yamapenki ahlazileyo.
Isixazululo soku-1 : Ndizama ukungazisebenzisi iipenki ezivame ukuvuza. Ndilahlekelwe iimbotyi ezimbalwa ngenxa yeepenki ezivuzayo.
Isixazululo sesi-2 : Ndizama ukungawasebenzisi iepenki ezivame ukuvuza, kodwa sele ndilahlekelwe iikoksi ezimbalwa ngenxa yeepenki ezivuzayo.
Amazwi okufundisa asetyenziswa kwiimvavanyo
Indlela yokusebenzisa iilayibrari kunye nee-Archives zoPhando
Ingxelo ephendulelweyo Inkcazo kunye nemizekelo
Isizathu esinokwenzeka kwi-US Criminal Justice
Fumana i-World War II II-Ancestors
Ibhinqa leNkosikazi elibulala uMnxeba we-Belle Gunness
Iingoma eziphezulu ze-Usher ezili-10
I-Sarovar - iGumbi eliNgcwele
Indlela yokucoca izibane